cele – Page 11 – CELE WINGAGAR
မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကျွေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ေ ကျာင်းမှာပဲ ခ င်ပွန်းရဲ့ ရက် လည်ကိုပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း….
August 29, 2021 100million 0
မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကျွေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ေ ကျာင်းမှာပဲ ခင်ပွန်းရဲ့ ရက်လည်ကိုပြုလုပ်ေ ပးခဲ့တဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း.. ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးနဲ့ ရုတ်တရက်ခွဲခွာသွားခဲ့ရတဲ့အတွက် ခင်ပွန်းအတွက် ဖြေ မဆည်နိုင်အောင် ဝမ်းနည်းနေရသ လို နေ့စဉ်နဲ့အမျှရည်စူးကုသိုလ်လေးေ တွ ပြုလုပ်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်..။နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းကဝောာ့ အဆိုးဝါးဆုံးအချိ န်တွေမှာ သားလေးနဲ့သမီးလေးအတွ က် အားတင်းပြီး […]
Prewedding ပုံေ လးကို သူမအိမ်ရဲ့ ဧည့်ခန်း မှာပင် ချိတ် ဆွဲထာြး ပီဖြစ်ေ ကြာင်း ပရိတ်သတ်ကိုချပြလာတဲ ဘေဘီမောင်…..
August 28, 2021 100million 0
ခင်ပွန်းလောင်းဖြစ်သူ သာဂန်းနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ P rewedding ပုံလေးကို သူမအိမ်ရဲ့ ဧည့်ခန်းမှာပင် ချိတ်ဆွဲထားပြီဖြစ်ကြောင်း ပရိတ်သတ်ကိုချပြလာတဲ ဘေဘီမောင်.. သရုပ်ဆောင်ဘေဘီမောင်ကတော့ဇာတ်ကားတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရင်းသရုပ်ဆောင်ပီပြင်လှတြာေ ကာင့်ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာ ရရှိထားတဲ့ မင်းသမီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားတရားအလွန်ကိုင်းရှိုင်းတဲ့ေ ဘဘီေ မာင်ကတော့အလှူအတန်းတွေမှာလဲရက်ရက်ေ ရာရောရှိသလိုသူမကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်တဲ့ဟင်းေ တွကိုလဲလှူဒါန်းပေးလေ့ရှိပါတယ်နော်။ ဘေဘီမောင်ကတော့တော်လှန်ရေးကြီးမှာလဲပြည်သူတွေ နဲ့အတူအမှန်တရားဘက်ကတ စ်သားတည်းပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်၊ပြည်သူများအ […]
မိန်းမပီပီသသ ဟင်းချ က်ကောင်းတဲ့ အြေ ကာင်းကို ဟင်းပွဲလေးတွေကဆင့် ပရိတ်သတ်ကို ထုတ်ကြွားလာတဲ့ မင်းသမီးချောလေး စိုးပြည့်သဇင်…..
မိန်းမပီပီသသ ဟင်းချက်ကောင်းတဲ့ အကြောင်းကို ဟင်းပွဲလေးတွေကဆင့် ပရိတ်သတ်ကို ထုတ်ကြွားလာတဲ့ မင်းသမီးချောလေး စိုးပြည့် သဇင်… သရုပ်ဆောင်စိုးပြည့်သဇင်ကတော့အမိုက်စားသရုပ်ေ ဆာင်ချက်တွေနဲ့အတူကျရာဇာတ်ကောင်မှာအေ ကာင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့်ပရိတ် သတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ အကယ်ဒမီမင်းသမီးပဲဖြစ်ပါတယ်။စိုးပြ ည့်သဇင်ကသရုပ်ဆောင်ကောင်းတဲ့အပြ အသံပါဝါအေးအေးလေးနဲ့တေးသီ ချင်းကောင်းများစွာကိုလဲတီဆိုထား တဲ့အဆိုတော်ကောင်းတစ်ယော က်လဲဖြစ်ပါသေးတယ်နော်။ စိုးပြည့်သဇင်ကတော့တော်လှန်ရေးကြီးမှာလဲပြည်သူတွေနဲ့အတူအမှန်တရားဘက်ကတစ်သားတည်းပါဝင်ပြီးလမ်းထွ ကာ […]
့ချစ်သူသက်တန်း (၈) လပြည့်တဲ့ နေ့ လေးမှာ ချစ်သူဆီ က တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ လက်ဆောင်တစ်ခုရရှိလိုက်တဲ့ M ဆိုင်းလု
ပရိသတ်ကြီး​ရေ ကချင်တိုင်းရင်းသူလေး M ဆိုင်းလုကတော့ အမျိုးသားထုကြီးရဲ့ အားပေး မှုတွေကို သိမ်းပိုက်ထာသူတစ်ယောက်ပါနော်။ သူများတွေလို လိုင်းမကြောင်ဘဲ မော်ဒယ်လော ကမှာသာ ရပ်တည်နေတဲ့ M ဆိုင်းလုကတော့ သူမတွင် ချစ်ရတဲ့သူရှိနေပြီ ဆိုတဲ့အကြောင်း ဝန်ခံထားခဲ့ပါတယ်နော်။ M ဆိုင်းလု ချစ်သူရသွားပြီဆိုတဲ့ သတင်းဟာ ယောကျာ်းလေးပရိသတ်တွေအတွက်တော့ အရမ်းကို […]
မိဘတွေရဲ့ နောက်ဆုံးခရီးကိုတောင် လို က်ပါပို့ဆောင်ခွင့်မရကြရှာတဲ့ ၅၀၅(က)ဖမ်းဝရမ်းအထုတ်ခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်များ….
မိဘတွေရဲ့ နောက်ဆုံးခရီးကိုေ တာင် လိုက်ပါပို့ဆောင်ခွင့်မရကြရှာတဲ့ ၅၀၅(က)ဖမ်းဝရမ်းအထုတ်ခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်များ.. မန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပို င်းမှာပြည်သူတွေကလုံးဝလက်မခံဘဲဆန့် ကျင်ဆန္ဒပြကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည် သူတွေအပြင်အနုပညာရှင်အများစုကလည်းအမှ န်တရားဘက်ကရပ်တည်ခဲ့ပြီးစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ခဲ့တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတချို့နဲ့အနုပညာ ရှင်တချို့ကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြီး ဖမ်းဆီးခဲ့တာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့အနုပညာရှင်တွေ ကတော့ လွတ်မြောက်နယ်မြေတနေရာ ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေစဉ်အတွင်းကိုဗ စ်ရောဂါကြောင့်ကွယ်လွန်သွားတဲ့ဖခင်တွေရဲ့ေ နာက်ဆုံးခရီးကိုတောင်လိုက်ပို့ခွင့်မရလိုက်တဲ့အနုပညာ ရှင်တွေဖြစ်တဲ့ပြေတီဦး၊ဖွေးဖွေး၊ထားထက် ထက်၊ညီနန္ဒနဲ့ချစ်သုဝေတို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ကွ […]
သူ့ရဲ့ မြန်မာပြည်အပေါ်ချစ်တဲ့ စိတ်ကို နားမလည်ကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကလူတချို့ရဲ့အပြစ်တင်စကားတွေကြောင့် ခံစားနေရတဲ့ စီနွန် Sinonကတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းမြန်မာပြည်ကိုချစ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးတစ်ယောက်ပါ။ ယခုသူကနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှု့ကြောင့်သူရဲ့ အမိနိုင်ငံကိုပြန်သွားခဲ့ရပေမယ့်မြန်မာကပြည်သူတွေအတွက်စိတ်ပူပန်နေခဲ့တာပါ။ Sinonကနာမည်ကျော်မော်ဒယ်တစ်ယောက်ြ ဖစ်ပေမယ့်မာနမကြီး၊လူတန်းစားမခွဲခြားပဲ ဆက်ဆံတတ်တဲ့ သူပါ၊မြန်မာပြည်မှာနေထိုင်စဉ်ကလမ်းဘေးကမရှိဆင်းရဲသားတွေကိုအမြဲလှူ ဒါန်းမှု့တွေကိုပြုခဲ့သူပါ။ သူ့ရဲ့ကိုယ်ချင်း စာပြီးကြင်နာတတ်တဲ့စိတ်လေးကမြန်မာပြည်သူေ တွကိုသတိထားမိခဲ့စေတာလဲဖြစ်ပါတယ်၊Sinonရဲ့ ရိုးသားတဲ့စိတ်လေးကြောင့်မြန်မာပရိတ်သတ်တွေက သူ့ကိုအချစ်ပိုခဲ့ကြ၊အားပေးခဲ့ကြတာပါ။Sinon ကမြန်မာပြည်ကိုချစ်သလိုမြန်မာ […]